14 / 08 / 2017 14 / 08 / 2017 ဒံယလေက 1951 Views စာ0မှတ်ချက် 41324 Snow Resort နှင်းလျှောစီး Lift, Friends, အားလပ်ရက်များ, Lego, Lego Friends, မီယာ, Olivia, ဆန်းစစ်ခြင်း, နှင်းလျှောစီး, အားကစားဆိုင်ရာ, အားလပ်ရက်, ဆောင်းရာသီ
အဆိုပါ Lego အုပ်စုနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောနေရာများကိုရှာဖွေရန်မကြောက်ခဲ့ပါ Friends မျဉ်းကြောင်း။ နောက်ဆုံးဆောင်းရာသီ ဦး တည်ရာ၏အထင်ကရနေရာသည်မိန်းကလေးများကိုရေခဲတောင်စောင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်
စျေးနှုန်း: £ 54.99 / $ 59.99 / € 59.99 အပိုင်းပိုင်း: 585 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
၎င်းသည်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတိုင်ကြားချက်ဖြစ်သည် Lego themes - မလုံလောက်သောအမျိုးမျိုး။ ပြီးနောက်၊ တည်ဆောက်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများစွာသာရှိပါသည် ရဲစခန်း သို့မဟုတ်တစ် မီးသတ်ဌာန ထိုသူအပေါင်းတို့သည် st မတိုင်မီart အတူတူနည်းနည်းပြေး။ ဒါဟာမျှတတဲ့ဝေဖန်မှုမဟုတ်ပါဘူး Lego Friends လိုင်း ဒီဇိုင်းပညာရှင်များကိုစတင်တည်ထောင်ချိန်မှ စ၍ နက်ရှိုင်းသောတောတွင်း မှစတင်၍ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကမ္ဘာအထိအန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများနှင့်အုပ်စုတစ်ခုလုံးသို့အုပ်စုလိုက်နေရာချရန်မတွန့်ဆုတ်ခဲ့ကြချေ။ In 41324 Snow Resort နှင်းလျှောစီး Lift ယခုသူတို့သည်ဆောင်းရာသီအပန်းဖြေမှုအတွက်မြင့်မားသောတောင်ပေါ်သို့တက်နေကြသည်။
၏မီးမောင်းထိုးပြ 41324 တစ်ခုလုံးကို set ကိုအပြစ်လွှတ်သောနှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ဝေးငါစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဖြစ် Lego ပွင့်လင်းသောနေရာများသို့ဖြတ်သန်းသွားသောအုပ်စုသည်လုပ်ငန်းခွင်များအလုံအလောက်မလုပ်နိုင်ပါ။ ငါမှတ်မိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးအချက်မှာမကြာခဏသတိမထားမိသော Power Miners အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်အလားတူယန္တရားကိုချော်ရည်မြစ်ပေါ်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သိပ်မထူးဆန်းပေမယ့်ဒီနေရာမှာနှင်းလျှောစီးသည်အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်သည့်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလိုမျိုးကစားနည်းမျိုးဟာရှားပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ပေါက်ကွဲတဲ့နံရံလိုအချိန်ကုန်လွန်ပြီးတဲ့အရာတစ်ခုလိုမခံစားရဘူး။ ဓာတ်လှေကား၏ခုံအောက်ခြေတွင်တပ်ဆင်ထားသောဘားကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အနိမ့်အရုပ်များသည်အောက်ခြေမှတောင်ထိပ်သို့အလွယ်တကူနှင့်လုံခြုံစွာစီးနင်းနိုင်သည်။
Lego Friends နှစ်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်းပုံသေနည်းတစ်ခုချမှတ်ခဲ့ပြီးသင်အလိုရှိပါကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးသည်လိုက်နာရန်လေ့ရှိသည်။ no partသူတို့က icular အမိန့်:
စစ်ဆေးပါစစ်ဆေးပါ Snow Resort နှင်းလျှောစီး Lift.
ထိုပထမအုပ်ချုပ်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော်လည်းဤကိစ္စတွင်မတူညီသောပုံစံများသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ပစ္စည်းငှားရမ်းသည့်ဘူတာရုံနှင့်ဆင်ခြေလျှောမြေပုံသည်ပျောက်ဆုံးသွားသောသီးခြားမော်ဒယ်၏ကျိန်စာအတွက်အမှန်ပင်ကျရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းထိုသို့သောအဆောက်အအုံများသည်အမှန်တကယ်နှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းများတွင်ပုံမှန်နှုန်းထားဖြစ်သည်။ အလားတူပင်အဓိကအပန်းဖြေစခန်းများတွင်သူတို့၏ထိပ်များ၌ရှိသောစားသောက်ဆိုင်များကိုမကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိပြီး၊ Friends မော်ဒယ်များ။ တောတောင်ထူထပ်သောသေးငယ်သည့်ကြားမှတောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည့်တောတောင်ထူထပ်သောတောတောင်ထူထပ်သောတောတောင်ထူထပ်သောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့်အလှအပကိုခံစားနိုင်သည်။
တစ်ခုတည်းသော part အတွင်းအတင်းအဓမ္မခံစားရသည့်အုပ်ချုပ်မှုကို 41234 ချစ်စရာတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ် ကလေး grizzly ဟုထင်ရသည့်အရာသည် ap နှင့်ကပ်လျက်ဖြစ်သည်artial အေးခဲအိုင်တည်ဆောက်။ ဒီကိစ္စကိုကလေးများမလာနိုင်တော့မယ်ဆိုတာသေချာပေမယ့်အဲ့ဒီ p ဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျောပိုးအိတ်ကအရာနှစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်art အစု၏ - မေးခွန်းထုတ်စရာသမာဓိမရှိ mama နှင့်ရေခဲနှင့်အတူတစ် ဦး ကလေးထမ်းရွက်။ မိန်းကလေးများကိုပြေး။ ပြေးကြလော့။
အလွန်ကောင်းမွန်သောဓာတ်လှေကားကိုစီး။ ကျွန်ုပ်တို့ယခုရင်ဆိုင်ရမည့်ချစ်စရာကောင်းသည့် Chateau ကိုညစာစားပြီးနောက် 41324 Snow Resort နှင်းလျှောစီး Lift's undoing - the ski' hill ။ The Lego အုပ်စုသည်တောင်ပေါ်အခြေပြုပစ္စည်းများနှင့်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ များစွာသောထမြောက်လာခဲ့ပြီး၊ အနည်းငယ်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာရိုးရှင်းပြီးတောင်ကြီးများ၌ပလပ်စတစ်တစ်တန်လိုအပ်သောကြောင့်စျေးနှုန်းအများစုသည်မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အုတ်ပမာဏကိုမရရှိနိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီ particular Alpine အထွတ်အထိပ်သည်တစ်ခုတည်းသောအဆောက်အ ဦး ထက်မမြင့်မားပါ။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများသည်ပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်တင်သည့်ဓာတ်လှေကားတာဝါများနှင့်စားသောက်ဆိုင်ခေါင်မိုးများအပါအ ၀ င်ဤအချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့ကြသော်လည်းနေ့၏အဆုံးတွင်တောင်ထိပ်သည်ခိုင်ခံ့ခြောက်ခုရှိသည်။
စော်ကားမှုကိုနှင်းလျှောစီးတောင်ထိပ်နှင့်အတူဒဏ်ရာမှဆက်ပြောသည်။ နားမလည်နိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ဒီဇိုင်နာများသည်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သောနှင်းလျှောစီးနှင့်အတူကောင်းစွာတီထွင်ထားသောပစ်လွှတ်သည့်ယန္တရားကိုလိုက်နာရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီကြမ်းတမ်းသောစီးနင်းမှုသည်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလွန်တိုသောကြောင့်မျက်တောင်ခတ်ပြီးသင်၏ပုံသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ နံပါတ်နှစ်ပြproblemနာကြောင့်၎င်းတို့သည်ထိုနေရာတွင်လဲလျောင်းနေကြလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ပြေးခြင်းကို ပို၍ မကျေနပ်မှုဖြစ်စေသည်။ ဒီအတွက်မော်ဒယ်ပင်ရှိပါတယ် Lego Group ၏ယခင်ထုတ်ကုန်အစုရှယ်ယာ ၃၅၃၈ Snowboard Boarder Cross Race ။ ပုံပန်းသဏ္twoာန်တစ်ခုအားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမထိစေဘဲရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုသာရှိသည်။
ကစားစရာအလားအလာမရှိခြင်းသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မဟုတ်ပါကအမှန်တကယ်အေးမြသည့်အရာတစ်ခုကိုရရန်အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ယူရသည့်ထူးဆန်းသည့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုထက်လျော့နည်းစေသည်။ ကလေးများသည်မလုံလောက်သောနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းဖြင့်ပျံ့လွင့်လာပြီးအခြားအရာများသို့သွားလိုကြသည်၊ ၄ င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ကြီးမားသောနှင်းလျှောစီးပြေးဆွဲခြင်းနှင့်အပြိုင်လမ်းကြောင်းများဖြင့်၎င်းတို့၏ကိန်းဂဏန်းများကိုနှိမ့်ချရန်ဖြစ်သည်။ အပတ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သူတို့နှင့်အတူကစားနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးများအတွက်အလွန်ကျေနပ်အားရဖွယ်ရာဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ သင်တစ် ဦး နှင်းလျှောစီး set ကိုတည်ဆောက်သွားလျှင်, သူကသင့်လျော်သောနှင်းလျှောစီးတောင်ကုန်းလိုအပ်သည်နှင့် 41324 ရုံမပါဘူး။
၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွယ်ကူစွာသိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အစုံ၏ထူးဆန်းသောခြေရာကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အများဆုံးအတွက်အလျင်အမြန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်လိမ့်မည်။art ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းရန်။ နှစ်သက်ဖွယ်အရောင်များသို့မဟုတ်ထူးခြားသော p ၏မရှိခြင်းartအလားတူပင် AFOL များအတွက်ဒီ set ရဲ့ utility ကိုလျှော့ချ။
ငါချီးကျူး Lego တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့အတူအခွင့်အရေးယူဖို့အုပ်စုလိုက်လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့အောင်မြင်ဖို့နီးစပ်လာတယ်။ အဆုံး၌စနစ်တကျကွပ်ကဲထားသောပြိုင်ကားဆင်ခြေလျှောနှင့်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းသည်ဤအစုကိုလွဲချော်သွားခြင်းမှပိုင်ဆိုင်ထိုက်သောအရာသို့မြှင့်တင်လိမ့်မည်။
41324 Snow Resort နှင်းလျှောစီးကိုယခုတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
နောက်ထပ် Lego Friends သုံးသပ်ချက်များ:
Lego Friends 41318 သူartရေကန်ဆေးရုံ
← LEGO MacBook Air တည်ဆောက်မှုသည်ပျံ့နှံ့နေသည်
Lego Star Warsဖြေ။ ။ Freemaker Adventures ကို 'Coruscant from Escape' ပြန်လည်သုံးသပ်သည် →